StackEdit: a Markdown mupepeti webhusaiti yako yewebhu | Linux Vakapindwa muropa
StackEdit: a Markdown mupepeti wewebhu browser
Vanogona kunge vasina kunge vanzwa nezvePageDown zvisati zvaitika, asi iwe unofanirwa kunge wakanzwa nezve Stack Kufashukira nenzvimbo dzayo dzehanzvadzi. Zvakanaka, PageDown ndiyo raibhurari yeMarkdown inoshandiswa neaya masevhisi uye ndizvo zvakare zvakavakirwa naStackEdit.
Zvakanaka, nhasi ndauya kuzotaura newe nezveStackEdit inova yakazara-inoratidza yakavhurika sosi yazvino yeMarkdown mupepeti uye ndiyo iyo Stack Kufashukira inoshandisa nekutadza uye kuti inoshandiswa zvakare munzvimbo dzese dzehanzvadzi.
Kune avo venyu vasina pfungwa kuti chii chinonzi Markdown, ini ndinokuudza izvozvo Markdown ndeye yakajeka zvinyorwa zvinyorwa markup mutauro iyo inokutendera iwe kuti uwedzere maitiro, mifananidzo uye zvinongedzo kune yakapusa chinyorwa chinyorwa. Unogona kushandisa Markdown kumisikidza zvinyorwa zvemazano ako muSpines. Markdown iri nyore kwazvo kudzidza uye kushandisa.
StackEdit inogona kushandiswa kubata akawanda eMarkdown magwaroZvese zviri pamhepo nekunze, zvinotibvumidzawo kugadzira zvinyorwa zveMarkdown zvinogona kutumirwa mumafomati akadai sePDF neHTML.
Pamusoro pazvo StackEdit inotipa kugona kugovera mune fomu rezvisungoTinogona zvakare kutsikisa paGitHub, Google Drive, Dropbox, Gist kana chero SSH server, neiri basa rekugovana isu tine mukana wekuona huwandu hwezvakagovaniswa.
Uyewo tinogona kuyananisa kune gore (Google Drive uye Dropbox) uye tumira kuBloggspot, Tumblr uye WordPress.
Nezve mashandiro eStackEdit, zvakakosha kuyeuka izvo:
Zvinyorwa zvinogadzirwa zvinochengeterwa mukati mekuchengetedza kwenzvimbo yebrowser, zvinoreva kuti hazvigoneke kugovana pakati pemabhurawuza akasiyana kana makomputa. Kubvisa yako browser data kunogona kudzima ako ese magwaro.
Izvo zvinodikanwa zvakanyanya kuti kuzara kuzere kweDropbox kana Google Drive kupihwe kukwanisa kuendesa chero gwaro muStackEdit. Zvinyorwa zvakaunzwa zvinotorwa kubhurawuza rako uye hazvitapurirwe kuseva.
Zvakare basa rinogona kukubatsira nderekuti iwe unozokwaziswa nemanotsi ekugamuchira kuitira kuti ugone kubata nemupepeti paunovhura kekutanga, zvinokurudzirwa kuti iwe uedze kutevedzera iwo magwara.
1 StackEdit maficha
2 Maitiro ekuisa StackEdit paLinux?
La application yakavhurwa sosi uye muchinjikwa chikuva: StackEdit inoshanda zvisina mhosva mune ese mabhurawuza emazuva ano uye kodhi yayo yekodhi yakavhurika mupiro paGitHub.
Una online gamuchira gwara uye matipi ekushandisa application.
Kutarisa kweHTML chaiyo-nguva ne scroll link basa rekubatanidza mupepeti uye tarisa scroll scroll.
Tsigira Markdown Yakawedzera, GitHub-Yakarongedzwa Markdown uye Prettify / Highlight.js syntax kuratidza.
WYSIWYG mabhatani ekudzora.
Customizable mushandisi interface.
Tsigiro yemashandisi ekushandisa uye ekuwedzera.
Inotsigira syncing kuGoogle Drive uye Dropbox.
Kamwe kubaya kutumira kuBlogger, Dropbox, Gist, GitHub, Google Drive, SSH server, Tumblr, WordPress.
Tsigiro yeLaTeX MatJax uye UML madhirama.
Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti iko kunyorera hakudi internet yekubatanidza kuti ishande.
Maitiro ekuisa StackEdit paLinux?
Kuti uise chishandiso ichi pane yedu system, isu tinofanira kuenda kuchirongwa chako paGitHub uye kurodha pasi iyo zip yacho, chinongedzo chinotevera.
Kana kana iwe uchida, iwe unogona kushandisa iyo terminal kuti uite iri basa, iwe unongofanirwa kuve uine git rutsigiro.
Pane iyo terminal tinoteedzera unotevera kuraira kuti tibatanidze.
Ipapo isu tinofanirwa kuisa dhairekitori rakadzikwa:
Uye pakupedzisira isu tinoisa ne
Kana kumisikidza kwaitwa isu tinokwanisa kutanga kunakidzwa, kuwana StackEdit, vhura browser rako kune localhost: 3000.
Iko kune zvakare kuwedzera kweGoogle Chrome browser, Chromium kana chero bhurawuza ine rutsigiro rwekuwedzera kweChannel, isu tinongofanirwa kuwedzera kubva chinotevera chinongedzo.
Kana iwe uchiziva nezvechimwe chikumbiro chakafanana neichi, usazeze kugovana nesu mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » StackEdit: a Markdown mupepeti wewebhu browser
Clipboard Pose - Iyo Yambuka-Platform Clipboard App